चर्चित नायिका प्रियंका कार्की आमा बन्दै ! हेर्नुस भीडीयो – Namaste Host
March 8, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on चर्चित नायिका प्रियंका कार्की आमा बन्दै ! हेर्नुस भीडीयो
दीपाश्री निरौलाको निर्देशनमा हाल छायांकनको क्रममा रहेको फिल्म ‘छक्कापन्जा–२’ मा प्रियंका आफुभन्दा केहि बर्ष कान्छी अभिनेत्री कि आमा बनेकी छिन्। एस अघिको सिक्वेल ‘छक्कापन्जा’को क्लाइमेक्समा शिवहरी पौडेलसँग वैवाहिक जीवनमा बाँधिएकी प्रियंका ‘छक्कापन्जा–२’ मा आमा बनेकी हुन्। शिवहरी र प्रियंकाको छोरीको भूमिकामा अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले अभिनय गर्दैछिन्। सुपर हट मोडल तथा अभिनेत्रीको ट्याग भिरेकी प्रियंकाको आमा भूमिकालाई दर्शकहरुले कत्तिको रुचाउने हुन् ? प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ।
काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा देखिएको व्यवहारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि प्रकट गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार साँझ सम्पन्न नेकपाको संसदीय दलको बैठकमा उहाँले संसदीय परम्परानुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक अगाडि नबढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभएको सो पार्टीका राष्ट्रिय सभाका मुख्य सचेतक खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वागत गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । पार्टी एकताका क्रममा देखिएका कमीकमजोरीलाई सच्च्याएर अगाडि बढ्ने र एकतालाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउने विषयमा प्रधानमन्त्रीले गम्भीर सम्बोधन गर्नुभएको नेता भट्टराईको भनाइ छ ।
सर्वोच्चको फैसलापछि पार्टीको अवस्था साबिकरुपमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का रुपमा पुगेको प्रधानमन्त्रीको कथन थियो । बैठकमा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापनाको फैसला जस्तै आइतबारको फैसलालाई समेत कार्यान्वयन गरेर जाने निर्णय भएको नेता भट्टराईको भनाइ छ ।